Senegal : Demba Dia, mpihira nirotsaka ho politisiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2018 5:26 GMT
Nambaran'ila senegaly mpihira, Demba Dia, ny fijoroan'ny antoko politikany manokana, ho fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka ao amin'ny faripifidianana ao Dakar.
Tsarain'ny “Blog Politique au Senegal ” ho sarotra raisina ho zavatra matotra ilay firotsahan'i Dia :
…tsy milaza olona izy, tsy tezitra aman'olona na amin'inona na amin'inona ary tsy manana faniriana misavoan-danitra raha jerena ny fandaharanasa napetrany.
Avoakan'ny “Blog Politique au Senegal” ihany koa ity sary nitarina ity : “Rehefa mampihomehy ireo mpanao politika, mandeha ho azy ny hoe mba manao politika koa ireo mpampifaly vahoaka”
Mazava loatra, tsy maningana i Senegal amin'ny fahitàna mpisehatra, mpiangaly gadona rock, mpilalao baolina kitra mirotsaka manao politika. -maneho hevitra i Chrisou, mpamaky:
Tsy Senegaly aho…saingy tena mahafinaritra be ahy ilay afisy sy teny filamatra ! Azo atao mihitsy aza ny mandray azy any amin'ny firenena hafa maro…
Vitsy ny fampahafantarana an'i Demba Dia aty anaty serasera an-tambajotra, fa afa-tsy iray tamin'ireo rakikira an-tsary nataony tao amin'ny Youtube, napetraky ny mpampiasa iray izay manosotra an'i Demba Dia ho “mpanjakan'ny rock Mbalakh”
Navoakan'i Jennifer Brea
Afrika Mainty01 Janoary 2020